ရဲဘော် ဦးတင် (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော) – ပန်ကော်-ချူးရွှေ တိုက်ပွဲစဉ် – အပိုင်း (၂) | MoeMaKa Burmese News & Media
● အထွေထွေသင်ခန်းစာ နိဂုံးချုပ်ချက်များ
၂၅။ နိဂုံးချုပ်သင်ခန်းစာများ ထုတ်နုတ်ရာတွင် တပ်ဖွဲ့များမှ နိဂုံးချုပ်ချက်များနှင့် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံအောင် မရ သေးခြင်း၊ လေ့လာတွေးတောရန် အချိန်နည်းသေးခြင်းတို့ကြောင့် ပြည့်စုံမှုတိကျမှုလိုဦးမည်ဖြစ်ရာ နောက်ဆက်လက်၍ ဖြည့်စွက်တည်းဖြတ်ခြင်းများ လိုဦးမည်ဖြစ်သည်။
၂၆။ ဤစစ်ဆင်ရေးတွင် ပထမဆုံးအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လွယ်မလုံမန်တောင်ထိပ်ကို မသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်း အတွက် များစွာစိတ်ထိခိုက်ကြရသည်။ ၎င်းတိုက်ကွက်မှာ မူလစစ်ဆင်ရေးစီမံကိန်းတွင် အဓိကနေရာမထား ဘဲ အရန်နေရာမှသာ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အမှန်အားဖြင့် ၎င်းသည် စစ်ဆင်ရေး၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သင့်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့ ညွှန်ကြားဦးဆောင်သူအဖွဲ့မှာ ပထမ ပန်လုံ၊ ဟိုပန်ကို တိုက်ခိုက်ပြီး နေရာစွဲခံစစ်နှင့်လည်း ကောင်း၊ ပန်ကော်-ဟိုပန်ကြား လှုပ်ရှားလာမည့်ရန်သူကို လှုပ်ရှားစစ်ဖြင့်လည်းကောင်း တိုက်မည့်ရည်ရွယ် ချက်ကို ဦးတည်၍ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ လွယ်မလုံမန်၏တန်ဖိုးကို ၎င်းဒေသမြေပြင်အခြေအနေ တိုက်ရိုက်တွေ့ မြင်လာပြီးမှသာ သူ့တန်ဖိုးလျှို့ဝှက်ချက်ကို နားလည်မိကြသည်။
၂၇။ ၎င်းမှာ ထိုဒေသတွင် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ပွိုင့် ၁၃၇၀ တောင် လွယ်မလုံမန်တောင်ကိုသာ ကျွန်တော်တို့ ရရှိခဲ့လျှင် –
(က) ရန်သူ၏ မြင်းပျံတောင်နှင့် ၎င်းနေရာရှိ ရှေ့တန်းတပ်ရင်းရုံး ယာယီတပ်ခွဲစခန်းကို အလွယ်တကူရမည်။ ထိုနောက် ၎င်း၏ညာဘက်ကပ်နေသည့် ရန်သူ့အမြောက်တောင်ကို ရမည်။ ၎င်းနောက် အမြောက်တောင်၏ တောင်ဘက် ကိုက် ၂၀၀ အကွာ ဟိုပန်ကိုမိုးနေသော တောင်နီတောင်ကိုပါရမည်။ ၎င်းတောင်တို့မှာ လွယ်မလုံ မန်မှ ဆင်းလာသည့် တောင်နိမ့်လျှောတလျှောက်တွင်ရှိကြသည်။
(ခ) ၎င်းမြင်းပျံတောင်၊ အမြောက်တောင်၊ တောင်နီတောင်တို့ကိုရလျှင် ရန်သူသည် ဟိုပန်တွင် မနေနိုင်တော့ ပေ။ ကျွန်တော်တို့ အနည်းငယ်အားထုတ်ရုံနှင့် ဟိုပန်ကို အလွယ်တကူရနိုင်သည်။
(ဂ) ဟိုပန်ရပြီးနောက် ဟိုပန်၊ လွယ်မလုံမန်၊ ပန်ကော်ကြားရှိ ရန်သူ ကချင် ၃ တပ်ရင်းကို အလွယ်တကူ ချေမှုန်း နိုင်လိမ့်မည်။
(ဃ) လွယ်မလုံမန်မှ အရှေ့ဘက် မီတာ ၂၀၀၀ ကျော် တောင်ကြောပေါ်ရှိ မြေပုံပေါ်ရှိ (P-890) အမှတ်ဖြစ်သည့် ရွှေဘိုတောင်ကိုပါ အလွယ်တကူ နိမ့်လျှောဆင်းသွားပြီး သိမ်းပိုက်နိုင်မည်။ ၎င်းမှ ကွန်လုံသို့ မိမိ ၇၅မမ အမြောက်များ မီတာ ၅၀၀၀ ပတ်လည်အတွင်းမှီသ ဖြင့် ကောင်းစွာ ခြိမ်းခြောက် ဖိနှိမ်ထားနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် နောင်ကွန်လုံကို လုပ်ကြံလိုကလည်း မိမိတို့အတွက် အလွန်သာလွန်သည့် မြေအနေအထားကို ပိုင်စိုးထားပြီး ဖြစ်သည်။ မသိမ်းလိုသေးကလည်း ကွန်လုံကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း ဟန်ပြတို့ဖြင့် မိမိတို့ကြိုက်သလို စစ်ကစားပြီး ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ ရန်သူမှာ မိမိတို့ကိုပြန်တိုက်ရေးအတွက်ထက် သူ့ကွန်လုံကာကွယ်ရေးကိုသာ လုံးပန်းရတော့မည်။ မိမိတို့ တောင်ဆင်ခြေလျောများမှာ ကွန်လုံနှုတ်ခမ်းနားအထိ ရောက်သွားသောကြောင့် လည်း ဖြစ်သည်။ နောက်တကြောင်းမှာလည်း ဟိုပန်နှင့် ကွန်လုံအကြား ကွန်လုံကိုကာကွယ်ရေးအတွက် အချက်အခြာနေရာများ မရှိတော့ပေ။
(င) လွယ်မလုံမန် ၏ အနောက်တောင် မီတာ ၂၀၀၀ အကွာ သံလွင်မြစ်ပေါ်ရှိ ဟာဖြတ်ကူးတို့ဆိပ်ကိုပါ မိမိတို့ သိမ်းပိုက်ထားလျှင် ၎င်းစစ်ဒေသတခုလုံးကို အနောက်ဘက်ဟာဖြတ်မှ အရှေ့ဘက်ပန်ကော်ထိ ဖြတ်ထားနိုင် ၍ သံလွင်အရှေ့ကမ်းတွင် ပန်လုံနှင့် ကူးလုံ ဟိုပန်အကြား ဖြတ်ထားနိုင်ရုံမက ရန်သူတောင်ဘက်မှလည်း မထိုးနိုင်၊
(စ) ရန်သူမှာ သူ့ကွန်လုံစခန်းကာကွယ်ရေးအတွက် မုချ ၈၉၀ ရွှေဘိုတောင်နှင့် ၁၃၇၀ လွယ်မလုံမန်တောင် တို့ကို ပြန်ရဖို့ အသေအလဲ ကြိုးစားတော့မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းတို့ကိုတိုက်ဖို့ဆိုလျှင် ရန်သူသည် နန်တင့် သို့မဟုတ် သံလွင်မြစ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ရပြီး ၎င်းမြစ် ၂ ခု ကြားမှနေ၍ တောင်တန်းများကိုမော့တက်ပြီး တိုက်ခိုက်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် ရန်သူတပ်ဖြန့်မှု အလွန်ကျဉ်းမြောင်းပြီး မိမိတို့၏ ဘယ်တောင်ပံ၊ ညာတောင်ပံ အလွန်လုံခြုံလျက်ရှိ၍ မိမိတို့လွယ်မလုံမန်တောင်ပေါ်တွင် တပ်ရင်း ၂ ရင်း ၃ ရင်းဖြင့်ပင် ရက်အနည်းငယ် အတွင်း ယခု ပန်ကော်၊ ချူးရွှေတိုက်ပွဲစဉ်အတွင်း ရန်သူကျဆုံးသည်ထက်မနည်း ထိခိုက်ကျဆုံးဖို့ သေချာပေ သည်။ မိမိတို့ဘက်တွင်လည်း မြေအနေအထားကောင်းမွန်နေသဖြင့် ယခုထက်လျော့နည်းစွာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရနိုင်ပေသည်။
(ဆ) ပန်လုံရှိ ရန်သူ့ခံစစ်စခန်းကြီးကိုလည်း ၎င်းတို့စွန့်ပစ်ရတော့မည်ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ဆုတ်ခွာစဉ် မိမိတို့ပြည်သူ့ စစ်နှင့် တပ်အချို့တို့က အဖက်ဖက်ဆို့ပိတ်ပြီး လိုက်လံချေမှုန်းနိုင်ပေသည်။
(ဇ) အထက်ပါ လွယ်မလုံမန်တောင်တန်းပေါ်တွင် မိမိတို့က ကြံ့ကြံ့ခံနေရာယူခံစစ်နှင့် တန်ပြန်ထိုးစစ်၊ တန်ပြန်လှုပ်ရှားစစ် စသည်တို့ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ပြီး ရန်သူအကျအရှုံးများစေပြီး ၎င်းတို့လက်လျှော့သွားရပေ လိမ့်မည်။ ယင်းသို့ဖြင့် သံလွင်အရှေ့ပိုင်း၊ မြောက်ဘက်ပိုင်း တခုလုံးကို လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်သွားပေလိမ့်မည်။ ရန်သူသည် ကိုးကန့်ခရိုင် သံလွင်အရှေ့ခြမ်းရှိ သူ၏တပ်များကိုပါ ဆုတ်ခွာပေးရပေလိမ့်မည်။ ယင်းဒေသကို ထိန်းသိမ်း သိမ်းပိုက်ထားဖို့ဆိုလျှင်လည်း ပထမ တပ်မဟာ ၁၂ ၏ တပ်ရင်း ၂ ရင်းနှင့် ဒေသတပ် ပြည်သူ့စစ် တချို့တို့ဖြင့် ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။ လွယ်မလုံမန်၊ ရွှေဘို၊ မြင်းပျံ ထိုအချက်အခြာ ၃ ခုတွင် လူ ၃၀ စီမျှရှိသည့် တပ်စုသုံးစုဖြင့် ကောင်းစွာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်။
(ဈ) ထို့ပြင် နောင်တပ်မဟာ ၁၂ ဌာနချုပ်နှင့် ၂ ရင်းလောက် အနည်းဆုံး တရင်းလောက်ကို အခြားလိုအပ်သော နေရာသို့ စစ်ဒေသမှ ဆွဲယူနိုင်ပေမည်။
၂၇။ ထိုဒေသကို မိမိတို့မတိုက်မီ ရန်သူ့တပ်တည်၊ တပ်စွဲအင်အားမှာ –
(က) လွယ်မလုံမန်တွင် ခြေလျင်တပ်စိပ် ၂ စိပ်နှင့် ၃ လက်မ စိန်ပြောင်းတလက်၊ ၃ . ၅ လောင်ချာတလက်
(ခ) မြင်းပျံတောင်တွင် ခြေလျင် ၂ စိပ်၊ ၃ လက်မ တလက်၊ ၃ . ၅ တလက်၊ စက်လတ်တလက်၊ ထို့ပြင် တပ်ရင်းရုံး စစ်ကြောင်း (၁) ရုံး အခြေစိုက်နေပါက ၎င်းရင်းရုံးသားအချို့နှင့် ကွန်မန်ဒိုတစု
(ဂ) ရွှေဘိုတောင်တွင် ခြေလျင်တစိပ်
(င) အမြောက်တောင်သည် မြင်းပျံတောင်နှင့် ယှဉ်ကပ်လျက် ၇၆ မမ ၂ လက်၊ ၁၂၀ မမ ၂ လက်ရှိသည်။
၂၉။ အထက်ပါ လွယ်မလုံမန်အရေးကြီးမှုကို သိနားလည်ပြီးနောက် စစ်ဦးစီးညွှန်ကြားရေးအဖွဲ့မှ အောက်တို ဘာ ၂ ရက်နေ့ နံနက် တပ်မဟာ ၁၂ မှ တပ်မဟာ ကေဒါများကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ယင်း၏ အရေးကြီးမှု အထက်ပါ အချက်များကို ရှင်းလင်းပြောပြပြီး ပထမအစီအစဉ်တွင် လွယ်မလုံမန်မှ အမြောက်တောင်အထိ တဆက်တည်း တပြိုင်တည်းလို ဆက်တိုက်တိုက်ရေးလိုမဟုတ်ဘဲ လွယ်မလုံမန်တောင်ကိုသာ စီးမိဖို့ တပ်မဟာတခုလုံး အာရုံစူးစိုက်ပြီး တာဝန်ယူစေသည်။ နောက် အမြောက်တောင်အထိသိမ်းပိုက်ရေးကို ဒုတိယအဖြစ် နောက် ပိုင်းမှ အရန်တပ်များ အကူအညီနှင့်ပါ သင့်တော်သလိုတိုက်ခိုက်မည်ဟူ၍ တပ်မဟာ ၁၂၊ ၂ ရင်းစလုံး လွယ်မလုံမန်တောင်ထိပ်ကိုသာ ဦးစားပေးတိုက်စေခဲ့သည်။
၃၀။ မအောင်မြင်ရသော အကြောင်းများအနက် ပထမအဓိကကျသည့်အကြောင်းများမှာ တပ်မဟာ ၁၂ အပေါ်တွင် များစွာတည်ရှိနေပေသည်။
(က) ပထမအဆင့် တောင်ထိပ်ရှိ ၂ စိပ်ကိုတက်ထိုးသည့် မိမိတပ်စု ၄ စုပါအားဖြည့်တပ်ခွဲမှာ အနည်းငယ် ထိခိုက်ကျဆုံးခံရပြီးနောက် ဆက်မထိုးဘဲ ဒုတိယအဆင့်ထိုးဖို့ အားဖြည့်မည့်နောက်ခံတပ်ရင်းကို စောင့်နေ သည်။ အစီအစဉ်အတိုင်း အထူးတပ်ခွဲကမရလျှင် ယင်း၏တပ်ရင်းက လိုက်ထိုးဖို့ရှိရာ ၎င်းတပ်ရင်းမှာ လွယ် မလုံမန်တောင်တန်းပေါ် ရောက်မလာခဲ့ပေ။ ယင်းနောက် ရှေ့တပ်ရင်းနှင့်အတူ ကပ်လျက် ဒုတိယတပ်ရင်း အသစ်နှင့် တပ်မဟာရုံးများ လိုက်ပါပူးပေါင်းပြီး ဒုတိယထိုးပွဲတွင် ပေါင်းစပ်ပါဝင်ဖို့ ကပ်ပါလာရမည့် အစီအစဉ် များလွဲမှား၍ လမ်းမှားကာ တောင်ပေါ်သို့မရောက်ဘဲ ၃ ရက်နေ့တနေ့လုံး အလွဲလွဲအချော်ချော် ဖြစ်နေကြ သည်။ သို့ဖြင့် စီမံကိန်းအတိုင်း လွယ်မလုံမန်ကို မရခဲ့ပေ။
၃၁။ ဤနေရာတွင် တပ်မဟာ ၁၂ သည် အားနည်းချက် ၂ ခုရှိသည်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည် ထင်ပါသည်။
(က) ပြတ်ပြတ်သားသားနှင့် ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ် ရဲရင့်တက်ကြွစွာ ပန်ကော်-ချူးရွှေထိုးစစ်တို့ကဲ့သို့ မဆင်နွှဲ နိုင်ခြင်းတို့ကို မြင်တွေ့ရသည်။ ယင်းအဖြစ်မျိုးကိုလည်း ၂၀ ရက်နေ့ ဖာကျွတ် တာရှံပို ရန်သူ့တောင်ပံ ရိုက်ချိုး သည့်တိုက်ပွဲတွင်လည်း ရှေ့တန်းတက်ထိုးသည့်တပ်များ ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ဖြင့် တွန့်ဆုတ်နေမှုကြောင့် တပ်မဟာကေဒါများက ကြတ်မတ်ပြီး နောက်ထပ် မိနစ် ၃၀ မျှ အမြောက်ပစ်ပြီးမှ တက်ထိုးနိုင်သည်ကိုလည်း တွေ့ရသည်။ နောက်လေ့လာသိရှိရသည်မှာ ၎င်းတပ်မဟာ ၁၂ သည် ယခုကဲ့သို့ အနီးကပ် မိမိလက်နက်ကြီး ဖြင့် တက်ထိုးသည့်အတွေ့အကြုံ အလွန်နည်းပါးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ထို့ကြောင့် တဟုန်ထိုးအခွင့်ထူးယူ၍ ထိုးနှက်ရမည့် အခြေအနေမျိုးတွင် နှေးကွေးတွန့်ဆုတ်မှုကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသည်ဟုထင်ပါသည်။
(ခ) တပ်မဟာခေါင်းဆောင်များသည် လွယ်မလုံမန်သို့ ၂ ရက်နေ့ည ချီတက်စဉ်နှင့် ၃ ရက်နေ့တနေ့လုံး မိမိ တပ်မဟာကို ကောင်းစွာချုပ်ကိုင် မစုစည်း မစည်းလုံးနိုင်ခြင်းကိုလည်း တွေ့မြင်ရသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာ ၎င်းခေါင်းဆောင်များ အချိန်မရ၍ ထိုမြေဒေသကို ကျွမ်းကျင်သိမြင်ရန် မြေပုံမှလည်းကောင်း၊ လမ်းပြများမှ လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တိုင်အဝေးမှ အချိန်လုံလောက်စွာ ကင်ထောက်ရှုမျှော်ကြည့်ခြင်းတို့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မေးမြန်းလေ့လာဖို့ အချိန်အနည်းငယ်သာ ရခဲ့သောကြောင့်လည်းကောင်း ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ နောက် ကပျာ ကယာရရှိလာသည့် လမ်းပြများမှာလည်း ချီတက်ရာလမ်းခရီးမှ အချို့ထွက်ပြေးကြ၍ ရန်သူဒေသအတွင်း အမှောင်ထုအောက်၌ အခက်အခဲများစွာ ဖြစ်ရဟန်ရှိသည်။
(ဂ) အချိန်မလုံမလောက် ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းများမှာလည်း ဤစစ်ဆင်ရေးကို ရန်သူရိပ်မိသိရှိပြီး မိမိထိုးမည့် စခန်းများကို အားထပ်မဖြည့်နိုင်အောင် အလွန်လျှို့ဝှက်သိပ်သည်းစွာဖြင့် သူလက်မဦးမီထိုးဖြစ်အောင် အချိန် လု၍တိုက်ခဲ့ရသည်။ ယင်းတွင် တပ်မဟာကေဒါများမှာ မိမိတပ်များနဲ့အတူတူသာ ရောက်ရှိလာသည်။ ၎င်းတို့ ချည်း အနည်းဆုံး ၁ ရက် ၂ ရက်စော၍ ရောက်ပါက ပို၍အချိန်ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(ဃ) နောက်ကြားသိရသမျှ တပ်မဟာ ၁၂ အချို့တပ်သားများစိတ်တွင် ပန်ကော်ချူးရွှေကိုသာ မိမိတို့၏ အခြား ညီနောင်တပ်ရင်းများက မရပါက ၎င်းတို့သည် ရန်သူအတွင်းပိုင်း ရောက်နေ၍ ဖြတ်တောက်ထိုးနှက်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကျခဲ့ကြောင်း တစိတ်တပိုင်းလည်း ကြားသိရသည်။ ယင်းမှာ ခေါင်းဆောင်များက တပ်မဟာ ၁၂ တပ်ရင်း ၂ ရင်းလုံး အဆင့်ဆင့်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့နှင့် ပန်ကော်ချူးရွှေ ပြီးလျှင် အရန်တပ်မှ ထပ်ဆင့်လာမည်နှင့် ထိုစဉ်က ပတ်ဝန်းကျင်ရန်သူ့အခြေအနေအားနည်းပုံတို့ကို စစ်သည်တော်အားလုံးအား ကျယ်ပြန့်စွာရှင်းလင်း ပြဖို့ အချိန်မရခဲ့ဟု ထင်ရသည်။ ထို့ကြောင့် မိမိတပ်အချို့၏ စိတ်တွင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိနေသည်ကို မရိပ်မိ မရှင်း လင်းနိုင်ခဲ့ပေ။
၃၂။ အခြားအကြောင်းရင်းတရပ်မှာ တပ်မဟာ ၁၂ ၏ ကန ၁-၂ ရှေ့တန်းညွှန်ကြားရေးစက် စတင်တပ်ထွက် ကတည်းက လုံးဝအဆက်အသွယ်မရ။ ၄ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီမှသာ စက် ၂ လုံး ဆက်သွယ်မိသည်။ ဤ အချက်မှာ အလွန်နစ်နာသောအဖြစ်ဆိုးတရပ်ဖြစ်သည်။ ရှေ့တန်းစစ်ဦးစီးဌာနမှ မည်သို့မျှ အကူအညီမပေး နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ရန်သူ့ထံမှရရှိသည့် သတင်းကိုသာ အားကိုး၍ အလွန်မပြည့်မစုံအကဲခတ်ရသည်။
၃၃။ (က) ထိုအတွင်း ချူးရွှေစခန်းပေါ်ရှိ ရှေ့တန်းကွပ်ကဲရေးဌာနမှ ဦးစီးညွှန်ကြားဌာနသို့ ၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ပေးပို့သည့်သတင်းတွင်လည်း ရဲဘော်ရန်စစ်ချီနှင့် အရန်တပ်များ ဟိုပန်တိုက်သိမ်းရန် ချီတက်သွားပြီဟူသော သတင်းမှားကြောင့်လည်း အခက်အခဲတွေ့ရသည်။ မိမိအရန်တပ်များမှာ ပန်ကော်-ချူးရွှေ ပြီးသည်နှင့် တပြိုင် နက် လွယ်မလုံမန် ရရှိရေးကို အားလုံးပေါင်းစပ်ထောက်ကူကြရမည် ဖြစ်ရာ ယခုကဲ့သို့တလွဲတချော်ဖြစ်ပါက –
(ခ) ၃ ရက်နေ့ညကစ၍ ဟိုပန်သို့ စစ်ကူတပ်ရင်းများ ၂ ရင်းမျှ ရောက်လာကြောင်းလည်း သိရ၍ ၎င်းတို့၏ အသက် လွယ်မလုံမန်ကို ၄ ရက်နေ့နံနက် လင်းအားကြီးမှစ၍ ကြီးမားစွာ အင်အားဖြည့်နိုင်ကြောင်းနှင့် တပ် မဟာ ၁၂ ကို ဗဟိုနှင့်မပေါင်းနိုင်အောင် ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်နိုင်သည်တို့ကိုလည်း စိုးရိမ်ရသည်။
၃၄။ နောက်တချက်မှာ ရန်သူ့သတင်းအရ ရန်သူအရာရှိတဦးနှင့် ကနစက်တလုံး အပါအဝင် တပ်စုတစုသည် လွယ်မလုံမန်တောင်ထိပ်သို့ လျှို့ဝှက်လမ်းဖောက်၍ အင်အားဖြည့်တင်းလိုက်နိုင်ကြောင်း ၃ ရက်နေ့ ညနေ လောက်တွင် သိရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရန်သူ့အင်အား အသင့်အတင့် ဖြည့်နိုင်သေးသည်ကို သိမြင်နိုင် သည်။
၃၅။ ရှေ့တန်းစစ်ဦးစီးညွှန်ကြားရေးဌာနမှာ မိမိတို့တပ်မဟာ ၁၂ သည် လွယ်မလုံမန်တောင်ထိပ်ကို ၃-၄ ည သို့ မဟုတ် ၄ ရက်နေ့လင်းအားကြီးတွင် အင်အားစုစည်း၍ ထိုးစစ်ဆင်လိမ့်မည်ဟု တညလုံး စောင့်မျှော်ခဲ့သော် လည်း မထိုး၍ ရှေ့တွင်ထိုးဖြစ်ဖို့ အလားအလာနည်းသွားပြီ ယူဆသည်။ ကနစက်အရ ရန်သူအားဖြည့် တပ်စုတစု ရှိသည်ဟူသောသတင်း တပ်မဟာ ၁၂ မှ ရရှိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဦးစီးညွှန်ကြားရေးဌာနသည် အထက်ပါအချက်အလက်များကို စဉ်းစားတွေးခေါ်ကြသည့်အပြင် အောက်ပါ-
(က) မိမိတို့ ပန်ကော်-ချူးရွှေတိုက်ပွဲတွင် အတော်များများထိခိုက်ကျဆုံးမှုရှိသည်များနှင့်
(ခ) ဟိုပန်ကူးတို့ဆိပ်၌ ဝမြောက်ခရိုင်မှလည်း ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများ ရှိသည့်အကြောင်းတို့ကြောင့် အောင်မြင်ရန် အခွင့်အရေးနည်းပြီး ထိခိုက်ကျဆုံးမှုများမည်ဆို၍ အခြေခံအားဖြင့် လက်ရှိအခြေအနေအရ မသင့်တော်က နေရာပြောင်းရွှေ့ ခွာစစ်ပြုရန် အမိန့်ပေးလိုက်သည်။
၃၆။ ၎င်းကနကိုလက်ခံသူမှာလည်း သက်ဆိုင်ရာကေဒါမရှိဘဲ သာမန်ကနသမားသာဖြစ်၍ အပြန်အလှန် မေးမြန်းညှိနှိုင်းမှုမလုပ်နိုင်ကြဘဲ အထက်ပါညွှန်ကြားမှုသာ ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ရေဒီယိုတယ်လီဖုန်းဖြင့် စကားပြော၍ ပေးလိုက်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကနရဲဘော်ကလည်း ရှင်းလင်းစွာပြောပြမှု မလုပ်နိုင်ဘဲ ဆုတ် ခွာမှုကိုသာ ဦးတည်သတင်းပို့ကြောင်း သိရသည်။
၃၇။ နောက် အောက်တိုဘာ ၅ ရက်နေ့မနက်စောစောတွင် ချူးရွှေတောင်ဆင်ခြေလျောအောက်၌ ရင်းကေဒါ အထက်အစည်းအဝေးကျမှ အောက်ပါတို့ကိုသိရသည်။
(က) ရန်စစ်ချီနှင့် အရန် ၅၀၁ တပ်ရင်း၊ ၄၀၄၆ တပ်ရင်းနှင့် အမြောက်တပ်ရင်းတို့သည် ၃ ရက်နေ့ နေ့လည် ကနအတိုင်း ဟိုပန်ကိုချီတက်ကြသည်မဟုတ်ဘဲ ပထမညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း တပ်မဟာ ၁၂ ၏ မပြီးဆုံး သေးသည့် ဝိုင်းဝန်းပေါင်းစပ် ကူညီတိုက်ခိုက်ရန် ၃ ရက်နေ့နေ့လည်စထွက်ပြီး ညနေ လွယ်မလုံမန်သို့ ချီတက် ရောက်ရှိပြီး ၄ ရက်နေ့မနက်တွင် တပ်မဟာ ၁၂ နှင့်ပေါင်း၍ အမြောက်တပ်များပါတိုက်ရန် အသင့်ဖြစ်ခါနီး ပြင်နေစဉ် တပ်မဟာ ၁၂ ၏ ကနသမားထံက ဆုတ်ခွာတပ်ပြောင်းရေးအမိန့်ကို ရသဖြင့် ဆုတ်ခွာလာရကြောင်း သတင်းပေးပို့ကြရာ များစွာစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြရသည်။
(ခ) ထိုစဉ်က တပ်မဟာကေဒါများမှာ ရှေ့တန်းတွင်ပြင်ဆင်နေ၍ ကနနားတွင် မရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့အသင့် ပြင်ဆင်နေပုံကိုလည်း မပြောပြနိုင်သဖြင့် ကနရဲဘော်၏ ရွှေ့ပြောင်းဆုတ်ခွာရေး ဦးတည်ညွှန်ကြားချက်ကို သာ ရရှိပြီး ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရသည်။ ထိုကြောင့် လွယ်မလုံမန်ကို ဒုတိယအချီ လွဲသွားရပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်။
၃၈။ အကယ်၍သာ ဤဒုတိယအချီအသင့်ပြင်မှုအရ တိုက်ဖြစ်လျှင် မိမိတို့အကျဆုံး အသင့်အတင့် ရှိမည်ဖြစ် သော်လည်း အောင်ပွဲရရှိမည်ဟု ယုံကြည်နိုင်ပေသည်။ အကြောင်းမှာ –
(က) ရန်သူလည်း တစုကျော်ကျော်သာ ရှိသေးသည်။
(ခ) ရန်သူ့စစ်ကူ ဟိုပန်ရောက်လာသော်လည်း လွယ်မလုံမန်ကို အခြေအနေရှင်းရှင်းမသိဘဲ အလောတကြီး အလျင်အမြန်မပို့နိုင်သေး။ တပ်ငယ်အချို့လောက်သာ အမြန်ထပ်တိုးပြီး ပို့ရန်ကြိုးစားမည်။ ယင်းကို တားဆီး ပိတ်ဆို့ရန် မိမိတို့တပ်ရင်းများစွာ ရှိနေပြီဖြစ်၍ မိမိတို့ထိုးတော့မည့်ထိုးစစ်ကို ထိခိုက်အောင် ဘာမျှလုပ်နိုင်စရာ မရှိ။
(ဂ) နောက်ရန်သူမှာ မိမိတို့က ချူးရွှေကို ရပြီးဖြစ်၍ ဟိုပန်တံခါးတပေါက် ပွင့်သွားပြီဖြစ်ရာ လောလောဆယ် ထိုတံခါးမှ ထိုးဆင်းချလိုက်မှာကိုလည်း စိုးပူပြီး အသင့်အတင့်ကာကွယ်ရေး ပြင်ဆင်ရဦးမည်။
(ဃ) သို့ဖြစ်၍ တောင်ထိပ်ရှိရန်သူ အထီးတည်း ဖြစ်နေရမည်။
(င) နောင်မှသိရသည်မှာ ၃ ရက်နေ့ည ဟိုပန်ရောက်စစ်ကူမှာ ၂ ရင်းမဟုတ်ဘဲ ခလရ ၁၂ နှင့် ခလရ ၃ မှ ၂ ခွဲကျော်မျှသာဖြစ်သည်။ ရှေ့တန်းရှိ သူ့ကချင် ၃ တပ်များ တောင့်ခံနေအောင် အချင်းချင်း လိမ်ညာခြင်းဖြစ် သည်။ ဤကဲ့သို့ သူတို့အထက်ကအောက်ကို လိမ်ညာတွန်းခိုင်းမှုများ မကြာခဏ နောက်ပိုင်း၌လည်း တွေ့ရ သည်။ ဤအရာမှာလည်း ကျွန်တော်တို့ နောင်သတိထားလေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာတခုဖြစ်သည်။
(စ) မိမိတို့ဘက်က အတွေ့အကြုံရှိ၍ ပြတ်သားထက်မြက်သော စစ်ဦးစီးအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များလည်း ရှိလာ ပြီး အလားတူ တပ်မဟာ ၁၂ မှ တပ်မဟာကေဒါခေါင်းဆောင်များလည်း စုံညီရှိနေ၍ ခေါင်းဆောင်မှုလည်း အားကောင်းပြီ။
(ဆ) တပ်အင်အားအနေဖြင့် တပ်မဟာ ၁၂ တပ်ရင်းများသာမက စစ်ဒေသမှ နာမည်ကျော် ၅၀၁ တပ်ရင်းနဲ့ ၄၀၄၆ တို့လည်း ရှိ၍ အင်အားအလွန်ဖူလုံသည်။
(ဇ) ထိုတပ်များအနက် ၅၀၁ ရင်းမှာ ကတုတ်ထိုးစစ်အတွေ့အကြုံကြွယ်ပြီး ရဲရင့်အပြတ်သားဆုံး တပ်ရင်းဖြစ် သည့်ပြင် အင်အား မူလကတည်းက ၅၀၀ ရှိ၊ တပ်ခွဲ ၅ ခွဲပါတပ်ရင်းကြီး ဖြစ်သည်။
(ဈ) မီးအားမှာ စစ်ဒေသအမြောက်တပ်ရင်း အများစုနှင့် တပ်မဟာ ၁၂ က လနကအချို့လည်း ရှိ၍ ကောင်းစွာ လုံလောက်သည်။
အထက်ပါတို့ကြောင့် အသင့်အတင့်အကျအဆုံး ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အောင်ပွဲရနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်နိုင်ပေ သည်။
၃၉။ နောက်တချက်မှာလည်း မူရင်းစီမံကိန်းအရ လွယ်မလုံမန်လုပ်ကြံရေးမှာ အရန်သဘောဖြစ်၍ စစ်ဆင်ရေး ဌာနမှ လိုအပ်သော လမ်းပြများနှင့် မြေအခြေအနေ ရန်သူ့အခြေအနေ ပိုမိုရင်းနှီးသိကျွမ်းအောင် ကူညီရေးတွင် ပန်ကော်-ချူးရွှေမှာလောက် အလေးထားချက်မညီ ဖြစ်သွားသည်ဟု ထင်မြင်မိသည်။
၄၀။ သို့ရာတွင် အရင်းခံမှာ နံပါတ် ၃၀ နဲ့ ၃၁ ပါ အချက်အလက်များသည် အဓိကကျပေမည်။
၄၁။ လွယ်မလုံမန်ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်ဝေဖန် နိဂုံးချုပ်ချက်တရပ်မှာ အကယ်၍သာ နံပါတ် ၂၇ တွင် ဖော်ပြခဲ့သလို အချိန်မီစွာစောစော လွယ်မလုံမန်၏အရေးပါအချက်အခြာကျမှုကို ကြိုတင်သိမြင် နားလည်ပါ က မိမိတို့၏ မူလစစ်ရေးဖြစ်သော ပန်လုံကို အာရုံထားပြီး ဟိုပန်ကြားမှာ ရန်သူကိုချေမှုန်းရေးအတွက် ပန်ကော် သိမ်းရေးကို ဦးမတည်တော့ဘဲ လွယ်မလုံမန်နှင့် ချူးရွှေကိုသာ ပထမအဆင့် ဦးတည်ပြီး တိုက်ခိုက်ရမည် ဖြစ်ပေသည်။ လွယ်မလုံမန် အဓိကဖြစ်သော်လည်း ချူးရွှေမှာ လွယ်မလုံမန်ထောက်ကူလမ်းဖွင့်ရေးအတွက် အရေးကြီးပေသည်။ ထို့ပြင် ဟိုပန်တံခါးပေါက်တခုလည်းဖြစ် ပန်လုံ-ပန်ကော်နဲ့လည်း အဆက်ဖြတ်ထားနိုင် သည်။ (နောင်အခြေအနေအရ အလွန်ဆုံး “ကုံးကော်”ကို တိုက်ယူကောင်းယူရမည်) လွယ်မလုံမန် ရပြီး နောက် ဟိုစွမ်မှ ချူးရွှေဖြတ်ပြီး လမ်းဖွင့်နိုင်ရင် အထက်ပါနံပါတ် ၂၇ အတိုင်း အခြေအနေအောင်မြင်မှုသို့ ရောက်ရှိလာမည်။
၄၂။ယင်းဝေဖန်ချက်သည် စစ်ဦးစီးညွှန်ကြားသူများအနေဖြင့် အထူးသဖြင့် စစ်ဆင်ရေးသက်သက်လေ့လာ စဉ်းစားဖို့ အချိန်အများဆုံးရသော ကျွန်တော့်အပေါ်တွင် တာဝန်ကြီးလေးစွာရှိခဲ့သည်ဟု ခံစားမိသည်။ စစ် မြေပြင်သို့ ၂၈ ရက်နေ့မှ ရောက်၊ ၂၉ ရက်နေ့လည်မှ တိုက်မယ့်စစ်ခွင်ကို ကင်းထောက်မြင်တွေ့ရသော်လည်း နောက်လမ်းခရီးတွင် ထိုဒေသမြေပုံမပါလို့ မလေ့လာနိုင်သော်လည်း မထွက်မီ အသေးစိတ်လေ့လာကြည့်မိဖို့ သင့်သည်။ ထို့ပြင် ၂၉ ရက်နေ့ ပြင်ရပြီးနောက် ချူးရွှေလည်း အံ့သြဖွယ်တွေ့ရပြီးနောက် ချက်ချင်းလိုလို အနေ အထားအသစ်ကို စတင်သိမြင်လာဖို့ သင့်ပေသည်။ ၃၀ ရက်နောက် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ညမှသာ ၂ ရက် ကြာမှ မြေပုံလေ့လာပြီး အထက်ဖော်ပြပါအမြင်သစ်ရခဲ့ရသည်။
ယင်းသည် နောင်သတိထားဖို့ ကြီးစွာနောင်တရစေခဲ့သည်။
ဤအထက်ဖော်ပြပါတို့မှာ လွယ်မလုံမန်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ နိဂုံးချုပ်သင်ခန်းစာများကို လောလော ဆယ်ဆယ် သိမြင်တွေး ခေါ်မိသလောက် ဖြေပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Tags: ကချင်, ရဲဘော် ဦးတင် (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော)
One Response to ရဲဘော် ဦးတင် (ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော) – ပန်ကော်-ချူးရွှေ တိုက်ပွဲစဉ် – အပိုင်း (၂)
komyominaung on March 27, 2016 at 10:56 pm
ဒီလိုစာပေကောင်းတွေ ဖတ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်